Isikhathi esining impela, odokotela okwatholakala "kolwelwesi atrophic" practice yabo emtholampilo. Nokho, ezokwelapha ziye namanje cha sondela kuvumelana yini noma cha lesi sifo singumbulali isifo abahlukene noma kuba - phetho ezihlukahlukene ezahlukene.
Zama ukuqonda ukuthi yini yasisiza ukugula, "kolwelwesi atrophic"?
Esiswini ungowokuqala ipheshana wokugaya ukudla, ukuze ukwehluleka yayo ngempela kuthinta yonke inqubo ukugaya, okukhwantabalisayo imisebenzi amathumbu ezinkulu kanye nezincane, pancreas.
kolwelwesi Atrophic, aguqulwa kakade ifomu okungamahlalakhona, ngokuvamile kubhekwa isimo precancerous esiswini, ngoba kungemuva yakhe ngokuvamile kwakheka izinguquko ezifana metaplasia emathunjini, futhi dysplasia we mucosa esiswini, eyagcina jikisa izimila.
Okungalapheki kolwelwesi atrophic - a thinning of ulwelwesi esiswini, kunciphisa inani le-nezindlala secretory kanye kumiswa ukwehluleka esiswini. Mucosal ungqimba ngenkathi kakhulu incipha.
Isici esiyinhloko lolu hlobo kolwelwesi wukuthi emva kokudla kukhona ukusinda esiswini, kunomuzwa ekugcwaleni emva wadla.
Izimbangela umuntu kolwelwesi atrophic ayivezi ngokugcwele. Umbono owamukelwa kukobana senziwa ukuthuthukiswa esiswini ukulimala mucosal ngenxa ye ukudla njalo, ukuba khona e ekudleni ebukhali, ukudla esidi, ukudla roughage ngokwanele, njll Ngalesi sifo ngempela ephelezelwa yokuntuleka ukukhiqizwa secretory immunoglobulin A, ukwakheka amasosha element main zokuzivikela ukusabela esiswini ukuthi aqale ukuze kubulawe amangqamuzana e nezindlala esiswini. Ngenxa zonke lezi izinqubo iqala yoma mucosal.
Ngokuvamile, iziguli nale Ihlahlubo akhononde okwengeziwe ukusinda esiswini, ngoba ubuhlungu ngesikhathi esifanayo lincane kakhulu. Kodwa ngokushesha ngemva kobana isidlo iqala burping, okuyinto ngokuvamile uhambisana ukunambitheka Rancid noma ezibabayo kancane kancane kuye esesuthi kwehle, isilungulela njalo ngemva kokudla, ubuthakathaka, isiyezi noma ukujuluka, ne ukwehla olukhulu endleleni umsebenzi secretory isisu e lendoda iqala ukuba ulahlekelwe isisindo.
Kancane kancane uqala ukuhlukumeza inqubo ukumuncwa esiswini namathumbu umzimba udinga izakhamzimba, umbono kahle ngenxa yokuntula uvithamini A, kukhona iphele kwesikhumba, nezinwele, izinzipho ziyaqothuka.
Ukuxilongwa kolwelwesi atrophic ibekwe ngesisekelo-X-ray, ukuhlolwa histological futhi gastroscopy. Kufanele kwenziwe intubation intragastric nokuhlola.
Ukwelashwa nokuvikelwa kolwelwesi atrophic kwenzelwe nje ngabanye, njengoba ke kuncike nesigaba lesi sifo.
Isiguli lokuqala inikezwe ukudla okufanele. Ukudla kolwelwesi atrophic kufanele ibe ukudla okunjalo kufanele ibe mnene ukuze ulwelwesi esiswini. Kuyinto ukudla, steamed, aphulwe futhi ayinazo Imicu yotshani indawo. Ngokuphelele iqedwe ukudla kushisa noma kubanda - kufanele esesivivi.
Ngokusobala, yebo, bangathi kusukela ekudleni ayifakiwe ngokuphelele abukhali, okumuncu, ngibhema enosawoti futhi ethosiwe ukudla. uphuzo carbonated, utshwala, amaswidi, ushokoledi, amabhisikidi, ukudla okusemathinini, ukhukhamba futhi akuvumelekile ukudla. Kunalokho, badinga inqwaba iphalishi, amasobho obukhulu ku umhluzi ababuthakathaka, inyama abilisiwe inhlanzi, imifino abilisiwe.
kudingeka ngokugcwele ukuba bangayeki yini ikhofi noma itiye eqinile, kufakwe endaweni yawo amanzi non-carbonated amaminerali, ukhokho, jelly.
Izidakamizwa nge izinqubo atrophic esiswini kuyabekwa, futhi ndawonye nabo - mzimba equkethe vislotu folic futhi B12.
Reflex - isibonelo. Izibonelo ikhaliphe azalwa naso futhi wathola, moya futhi unconditioned kubantu nasezilwaneni
Parenterally - kunjani? Sifuna impendulo ndawonye
Yini izinyawo abandayo uma
Ukubhula endlini - yindlela enhle ukwazi ikusasa
Isisekelo ku isikulufa yinqwaba: ukubuyekezwa kanye ngokoqobo
Indlela ukuthatha imali ngaphandle kwenzalo ukuze MTS ukuze uhlale uthintana
Ukholifulawa. izakhiwo awusizo kuzuze wonke.
Pasties: isidlo abantu kabani kazwelonke? Kuhle zokupheka
Castle Ragnit lapho? Amaqiniso ethakazelisayo nezithombe
Sibutsetelo smartphone ASUS PadFone E: incazelo, izici kanye nokubuyekeza
Resistant lip liner Nyx SLLP
Ezicijile - njengoba ephephile futhi Interior
Udweba kanjani inyamazane nengane